नेपालमा जातिय मुद्दा होइन, नश्लिय मुद्दा बुझौ : अमित याक्खा - MONGOL KHABAR
नेपालमा जातिय मुद्दा होइन, नश्लिय मुद्दा बुझौ : अमित याक्खा
धरान । जेठ १५ बिहिवार, हृदय बिदारक रुकुम चौरजाहरी घटना प्रेम सम्बन्धको थियोे । मृतक नवराज बिकलाई दलित भएकै कारणले प्रेम सम्बन्ध फापेन । आखिर प्रेम सम्बन्धको कारण देखाई उनको जातिय हिंसाले बीभत्स हत्या गरियो ।
यस क्रममा समाजिक संजालमा एक दुई जना झोलेहरु बुरुक बुरुक उफिदैथ्यो । उनिहरुको मालिक पुर्ब गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा बाहुनले पनि रुकुम घट्नामा ज्यान गुमाउने भिडन्तमा भाग्ने क्रममा भेरी नदिमा परि मृत्यु भएको बताईरहदा एउटा भिडियो सार्बजनिक भयो । त्यही भिडियो हेरे त्यही भिडियोमा स्थानिय जनताले समाजमा घृणित ब्यक्ति जो राज्यबाट दलित बनाइएका छ । बाहुनबादी पार्टीका झोलेहरु हासिहासी दलित नाम स्विकार्ने, मुलबासीको छोरालाई दलित भएकै कारणले कुट्पिट गरि तस्बिरमा हेर्दा डोरिले बाँधेर भेरी नदिमा फालेको रहेछ ।
अनन्त ती निर्दोष युबाहरुको मृत्यु पश्चात् शरीर भरी चोट र डोरिले बाँधेको तस्बिर समाजिक संजाल भरी भाइरल भयो । कतिले मन थाम्न सकेन । सबैको आँखा रसायो । यस्तो बेलामा वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमला र रबि लामिछाने जस्ता पत्रकारहरु मौन किन ? मौन बस्नुमा काले काले मिलेर खाउ भाले भन्ने उखान जस्तै बाहुन बाहुन मिलेर मुलबासी सिध्याउने नीति प्रष्ट प्रमाणित भयो । देशका दलित जनताले न्याय कहिले पाउने ? दलित भएर कहिले सम्म जातिय हिंसामा मरिरहने ? देश र जनता समृद्धिलाई भन्दा बाहुन भाइचारा कायम भयो हैन र ? यी पत्रकार देशमा भएको जातिय कुराको नारा लगाएर थाक्दैन, तर नीति र सिद्धान्त बाहुन-बाहुन एक भैरहेको छ मुलबासीहरु शासक बिरुद्ध किनिरहेको छ, बेचिरहेको छ र मरिरहेको छ । यी दुई पत्रकार आफ्नै दाजुभाई माथि जातिय कुरा गर्न हुन्न भन्दै खेद प्रकट गर्न पनि पछि हट्दैन । तर नेपालको बाहुनबादी मिडियाको मुल्यांकन मुलबासी मंगोलहरुले छर्लङ बुझिरहेको छ ।
हामी मंगोल/मंगोल एक हौ भन्छौ । जातिय कुरा नगर भनेर बाहुनबादी डिजाइनमा परेको जनजाती र दलित संघ-सस्थाहरु हामी विरुद्धमा लागि पर्नु एक उदाहरणिय उपज हो । अझै मुलबासीहरु डाक्टर गोपाल गुरुङ ज्युको सिद्धान्त/दर्शन अनुरुप एक नभईसम्म कामी मर्दा मगर हास्ने मगर मर्दा गुरुङ थपडी मार्ने गुरुङ मर्दा लिम्बू खुचिङ गर्ने लिम्बू मर्दा तामाङ गिज्याउने तामाङ मर्दा थारुलाई मतलब नहुने थारु मर्दा तराइबासी घटेछ भनेर राई खुसी हुनु राई मर्दा शेर्पालाई मतलबै नहुनु शेर्पा मर्दा नेवार भोटे मरेछ भनेर सोच्नु अनि नेवार समुदाय माथि काठमाडौमा गुठी बिध्येक शोषण गर्दा अन्य जातिसमुदाय चुप लागेर बस्नु नै बाहुनाबादी डिजाइन हो ।
त्यसैले बाहुनबादी नीतिको बिरोधमा मुलबासी मंगोल हरु एक हौ । मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन -डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठनलाई सबै मुलबासीले अध्यन गरौ ।नेपालमा जातिय मुद्दा होइन, नश्लिय मुद्दा बुझौ । मुलबासी जिन्दाबाद,जय मंगोल जय मुलबासी ।
लेखक :- अमित याक्खा